Tanàna Espaniola manintona mandresy ny Instagram | Vaovao momba ny dia
Susana godoy | | Toerana fitsangatsanganana
Mila andro fialantsasatra vitsivitsy ve ianao nefa tsy te handeha lavitra? Tsara vintana ianao, satria akaiky anao be dia be ny tanàna espaniola izay misy mpitia eo afovoany Instagram. Ka azo antoka fa hanao toa anao koa izy ireo. Toerana mangina izay ahafahanao miala amin'ny asa sy olana hafa, raha toa ka manodidina antsika amin'ny majika sy ny zorony tsy manam-paharoa izy ireo.
Hatsaran-tarehy izay, indraindray isika manana dingana, nefa tsy tsapantsika. Noho izany, anio dia hanome anarana azy rehetra isika. Tanànan'ny Espaniola miaraka amin'ny tantara maro, lova sy zoro izay tsy hohadinoinao. Fialan-tsasatra mendrika amin'ny toerana mahafinaritra. Manangona ny kitaponay ve isika?
1 Llanes no tanàna mandresy ao amin'ny Instagram
2 Sóller dia naka ny medaly volafotsy raha voalaza
3 Mogán, toerana tora-pasika tsara amin'ny toerana fahatelo
4 Sarria, iray amin'ireo tanàna Espaniola malala indrindra
5 Astorga, tanànan'ny León amin'ny toerana fahadimy
6 Palafrugell toerana fahenina ho an'ity tanànan'i Girona ity
7 Santoña amin'ny toerana fahafito amin'ny laharana
8 Vejer de la Frontera any Cádiz
9 Baeza, toerana iray lova manerantany
10 Cambados, eo amin'ny laharana fahafolo sy farany amin'ny filaharana
Llanes no tanàna mandresy ao amin'ny Instagram
Manomboka amin'ny tanàna izay be mpiresaka indrindra amin'ny Instagram izahay. Noho izay nataony tamin'ny medaly volamena, ary tsy mahagaga izany. Tokony holazaina fa manana tenifototra maherin'ny 214.842 izy ao amin'ny tambajotra sosialy, araka ny laharana nomen'ny motera fikarohana momba ny fanofana fialan-tsasatra, Holidu. Eny, i Llanes dia any Asturias, mandro amin'ny ranomasina Cantabrian ary tena akaiky ny Picos de Europa. Ny morontsiraka mahafinaritra sy ny faritry ny seranana dia mifanohitra amin'ny rindrin'ny tendrombohitra sy lohasaha manodidina azy. Mazava ho azy fa tsy azontsika adino ny Lova Artista izay manasongadinana ny lapan'i Count la Vega del Sella, Lapan'ny Dukes of Estrada, Church of San Salvador na, ny Torreón de los Posada sy ny maro hafa.
Sóller dia naka ny medaly volafotsy raha voalaza
Nahatratra 209.667 XNUMX ny voalaza tao amin'ny Instagram no nahatonga an'i Sóller ho iray amin'ireo tanàna espaniola manintona indrindra. Any avaratrandrefan'i Mallorca no misy azy, nanjary nalaza be izy io noho ny voany voasarimakirana. Androany, avy ao am-pony miorina ao amin'ny Plaza de la Constitución, afaka mankafy zoro tokana sy gastronomika mahafinaritra ianao. Ny kamiao izay mifandray amin'ny faritry ny seranana dia malaza be, tsy manadino ny mitsidika ny Fiangonana Sant Bartomeu.
Mogán, toerana tora-pasika tsara amin'ny toerana fahatelo
Izy no mitana ny laharana fahatelo amin'ity filaharana ity, miaraka amin'ny tenifototra 122.970, amin'ireo tanàna Espaniola izay be mpampiasa indrindra ao amin'ny Instagram. Any Gran Canaria no misy azy, noho izany dia miresaka faritra amoron-dranomasina tsara isika. Saingy tsy izany ihany, fa ho hitantsika ny faritra misy seranan-tsambo, hantsam-bato ary promenades, amin'ny faritra hantsana kanto kanto. Ny sasany amin'ireo morontsiraka malaza indrindra dia ny La Verga na morontsiraka Patalavaca, tsy manadino ny Beach of Puerto Rico.
Sarria, iray amin'ireo tanàna Espaniola malala indrindra
Miverina any avaratra izahay ary amin'ity tranga ity dia mijanona ao Lugo izahay. Na dia manokana kokoa ao Sarria aza. Tanàna iray izay manana anarana 103.117 mahery ao amin'ny Instagram. Miaraka amin'ny mponina 13.000 mahery, manome antsika doka ara-kolotsaina tsara amin'ny endrika Torre de la Fortaleza sy ny Monasiteran'ny La Magdalena tamin'ny taonjato faha-XNUMX. Mazava ho azy fa amin'ity toerana rehetra ity dia mbola hita izy ireo fiangonana Romanesque 20 mahery.
Astorga, tanànan'ny León amin'ny toerana fahadimy
Miaraka amin'ny 89.068 voalaza, Astorga dia miseho amin'ny laharana fahadimy. Saingy izy io dia iray amin'ireo tanàna Espaniola tsara tarehy sy ankafizina indrindra. Ankoatr'izay dia tsy maintsy miverina amin'ny taonjato XNUMX talohan'i JK isika rehefa teraka ho tobin'ny miaramila. Androany isika dia afaka mitsangatsangana mamakivaky ny Ben'ny tanàna ao amin'ny Plaza, avelao ho talanjona isika Lapan'i Guadí na ny Katedraly, tsy manadino ny rindrin'ny medieval ary mazava ho azy, ny tranom-bakoka sôkôlà. Fijanonana mamy izay mendrika foana.
Palafrugell toerana fahenina ho an'ity tanànan'i Girona ity
Izany dia tanàna amoron-tsiraka sy fanjonoana. Noho izany, efa fantatsika izany, fantatsika ny hatsarany miaraka amin'ireo filentehan'ny masoandro amin'ny tranony fotsy kely, ireo lava-bato ary ala Mediteraneana. Izany rehetra izany dia manome fiadanam-po mba hankafizana fitsaharana roa andro. Tsy mahagaga raha manana 85.947 voalaza.
Santoña amin'ny toerana fahafito amin'ny laharana
Ao amin'ny faritra atsinanan'ny Cantabria no ahitantsika an'i Santoña. Eny, iray amin'ireo tanàna espaniola malala indrindra ao amin'ny tambajotra sosialy Instagram izy io. Koa satria 84.403 XNUMX no voalaza. Raha vantany vao manitsaka ity tany ity ianao dia tsy misy toa ny manao antso Làlan'ny jiro fanazavana momba ny soavaly. Mazava ho azy, raha te hiditra azy io dia ilaina ny hidina amin'ny dingana 685 sy 100 hafa raha te hangatsiaka ao anaty ranomasina ianao. Ny Santo Bay Bay sy ny seranana misy azy dia faritra hafa hodinihina.
Vejer de la Frontera any Cádiz
Nahatratra ny laharana fahavalo isika, niaraka tamin'ny fanamarihana 81.171 200 tao amin'ny Instagram ary izany dia mitondra antsika any amin'ireo tanàna espaniola tsara tarehy sy manintona indrindra. Maherin'ny XNUMX metatra ny haavony ary amoron'ny reniranon'i Barbate. Voaro rindrina ny ivon-tantara misy azy ary mbola tazana ny tranony sy ny fiangonana maromaro. Mandehandeha eny amin'ny arabe tery ianao dia hankafy ny hakanton'ny tranony sy ny firavaky ny voninkazo ao anatiny.
Baeza, toerana iray lova manerantany
Niara-nambara toy izao niaraka tamin'i likebeda, ary tsy mahagaga ihany koa izany. Hatramin'ny niakarako tany amin'ny tany onenana efa hatramin'ny andron'ny alimo. Noho io antony io, ny lovany dia manankarena amin'ny fomba isan-karazany sy ny fifangaroan'ny kolontsaina. Ny miditra ao Baeza dia miverina any mamelombelona ny vanim-potoana medieval. Ny arabe vato, ny kianja, ny katedraly ary ny loharano aza dia ohatra tsara amin'izany rehetra izany.
Cambados, eo amin'ny laharana fahafolo sy farany amin'ny filaharana
Farany fa tsy ny kely indrindra dia mahita an'i Kambôdà isika Any Pontevedra no misy azy ary iray amin'ireo tanàna Espaniôla izay manana anarana 66.079 ao amin'ny Instagram. Voafidy ho tanàna eran'ny divay eropeana izy. Ka ny fitsidihana ireo tany ireo dia mieritreritra mandrakariva ny fanandramana vokatra mahazatra toy izany. Fa ankoatr'izay, ny trano mendri-kaja, ny masera San Francisco na ny rava an'i Santa Mariña Dozo, no iray amin'ireo hevi-dehibe amin'ity toerana ity. Firy amin'ireo tanàna ireo no efa notsidihinao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Toerana fitsangatsanganana » Ireo tanàna espaniola 10 manintona mandresy ny Instagram